सलमान खानको सुरक्षा यसरी हुँदै ! – ejhajhalko.com
सलमान खानको सुरक्षा यसरी हुँदै !
१२ माघ २०७४, शुक्रबार ०२:०० 457 पटक हेरिएको
बलिउड सुपर स्टार सलमान खान नेपाल आउने निश्चित भएको छ । फागुन २६ गते काठमाण्डुको टुँडिखेलमा हुने कार्यक्रममा सलमानसँगै बलिउडका अन्य कलाकारहरु पनि आउने आयोजक ओडीसी इन्टरटेनमेन्टले जनाएको छ । सलमान जेट एयरलाइन्सको विमानबाट २५ गते काठमाण्डु आइपुग्नेछन् । ७ जना कलाकारका साथमा ९० जनाको टोली होटल सोल्टीमा बस्ने बताइएको छ । जम्मा तीन दिन सलमान नेपाल बस्नेछन् ।
उनीसँगै कार्यक्रममा नायिका सोनाक्षी सिन्हा, निर्देशक प्रभु देवा, डेजी शाह, कृति सेनोन र पञ्जाबी भाँगडा डान्सर ‘मिड बोस’ पनि आउने आयोजकले जनाएको छ । सलमान आउने पक्का भएपछि प्रचार प्रसार सुरु गरेको ओडीसी इन्टरटेनमेन्टका सिमान्त गुरुङले जानकारी दिए । कार्यक्रम हेर्न टिकट काट्नुपर्ने गुरुङले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रम हेर्ने ठाउँअनुसार टिकट दर फरक फरक तोकिएको छ ।
उनलाई १५ सयभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मीले कार्यक्रमस्थलमा सुरक्षा दिने , ५ सय प्राइभेट सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने र ४ सयजना स्वयंसेवकले कार्यक्रमलाई व्यवबस्थित गर्नेछन् । कार्यक्रमको टिकट ग्लोबल आईएमई बैंकबाट पाइने छ । टिकट ३ हजार, ५ हजार र १० हजार दरका हुनेछ । सलमान सन् १९९४ पछि दोस्रो पल्ट नेपाल आउन लागेका हुन् ।